Ajụjụ - Yixing City Jitai Electronics Co., Ltd.
Ọnụahịa anyị dịgasị iche dabere na ihe eji, mgbagwoju anya nke imewe / mmepụta, na oke. Dị ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwaahịa anyị ahaziri, anyị na-arụ ọrụ na eserese ndị ahịa iji nye nsụgharị omenala ngwa ngwa o kwere mee.
Ee e, enweghị usoro kachasị dị ntakịrị. Otú ọ dị, dị ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwaahịa anyị na-ahaziri, e nwere mgbe a tooling ụgwọ jikọtara na imewe nke a ọhụrụ ngwaahịa ụdị, eg omenala Ebu ga-kpụrụ wdg. Nke a na-factored na ngụkọta na-eri nke iji. Maka obere obere ọnụọgụ, nke a nwere ike bụrụ ihe na-egbochi ụfọdụ ndị ahịa.
Iji nlezianya na-ekwu okwu, izu 6-8 dabere na mgbagwoju anya nke ọrụ
Ugbu a, anyị na-anabata nnyefe ụlọ akụ. Ke ofụri ofụri, anyị na-arịọ a 30% T / T ala ugwo na a pụrụ isi chọta nke iji, na ndị fọdụrụ 70% ruru n'elu Mbupu.
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu. Anyị na-ejikwa ngwongwo ihe ọghọm pụrụ iche maka ngwongwo dị egwu yana ndị na-ebu ihe nchekwa oyi echekwara maka ihe anaghị echekwa ihu igwe. Ngwunye ọkachamara na ihe ndị na-abụghị ọkọlọtọ nwere ike ịnweta ụgwọ ọzọ.
Gwọ ụgwọ na-agbanwe dabere na ndị ahịa ụlọ ọrụ nnyefe họrọ. Anyị na ndị isi mba ọzọ na anụ ụlọ niile na-arụ ọrụ. Biko kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe.